Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Endalk Chala · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Endalk Chala
Voadika ny 15 Marsa 2017 3:41 GMT
Endalkachew Haïlemikael Chala no anarako, nafoheziko ho Endalk. Hitako ho mora ampiasaina kokoa izay. Mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny tontolo tandrefana, ao Etiopia, ny anaran'ny rainay no ampiasaina any anatin'ireo vanim-potoana rehetra, na manaraka ny fenitra io na tsia. Taorian'ny nahatongavako tao Etazonia tamin'ny 2013, nesoriko ny anaran'ny raiko (Haïlemikael) ka nosoloiko ny an'ny raibeko (Chala) ho toy ny anaram-pianakaviana mifanaraka amin'ireo fomba fiantso tandrefana.
Mandra-pahatongako tao Oregon, niaina tany aminà faritra maro tany Etiopia aho. Nandany ny fahazazàko tao Harar, tanàna iray tranainy any atsinanan'i Etiopia. Rehefa nianatra teny amin'ny ambaratonga fototra dia nipetraka tany Ginchi, tanàna iray any amin'ny 68 km andrefan'i Addis-Abeba, renivohitra etiopiana. Taorian'ny lisea, nianatra tenim-pirenena sy ny literatiora anglisy aho, nandritry ny efatra taona tao amin'ny oniversite-n'i Dilla. Avy eo aho nandeha tany amin'ny oniversiten'i Arba Minch handray asa hampianatra teny anglisy Tao Arba Minch, tena asa hafa tanteraka no nosahaniko : ny asa fanaovana gazety. Resy lahara aho fa mety hanatsara ny asako ny fanarahana fianarana ambony momba ny asa fanaovana gazety, niditra tao amin'ny Sekoly fianarana ny asa fanaovana gazety sy ny fifandraisana tao amin'ny oniveriten'i Addis-Abeba aho ny taona 2006. Rehefa vita ny fianarana teny amin'ny ambaratonga ambony, niverina tany Arba Minch aho hampianatra ny asa fanaovana gazety. Taorian'ny dimy taona niasàna sy nampianarana ny asa fanaovana gazety, niditra tao amin'ny sekoly fampianarana ny asa fanaovana gazety sy fifandraisana tao amin'ny Oniversiten'i Oregon aho, ny taona 2013, mba hanomana ny diplaoma ‘doctorat’.
Fony aho tany Etiopia, tsy afaka nanana asa marintoerana amin'ny maha-mpanao gazety ahy aho, saingy tiako ny manoratra lahatsoratra fanao an-gazety mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy, sy mitondra fijery hafa an'i Etiopia ho an'ny Global Voices. Ny sasany tamin'ireo lahatsoratro dia nivoaka ihany koa tao amin'ny Guardian, ny Washington Post, ny BBC, NPR. Ao anatin'ny sehatry ny asa fanaovako gazety, tamin'ny 2012 dia niaraka nanorina ny biloagy iraisana Zone9 aho.
Ao Etiopia, tsy nanaraka ny fironana erantany momba ny fifindramonin'ny gazety ho lasa ety anaty aterineto izahay. Ny famoretana ataon'ny governemanta amin'ireo mpanao gazety no nanery anay handray ny aterineto ho toy ny hany sehatra fanolo azonay iainana. Indrisy, tsy nisy nataon'ny governemanta etipiana niangana na iray aza. Enina amin'ireo mpiaraka miasa amiko ao amin'ny Zone9 no nandany 16 volana tany am-ponja ; ny helok'izy ireo dia ny nampiasàny ny aterineto ho toy ny sehatra iray hamoahana lahatsoratra. Ny fisamborana sy fitsaràna ireo mpiaraka miasa amiko no nampisidina ilay raharaha ho eo anoloan'ny sehatra iraisampirenena noho ny fanohanana tsy nitandroana hasasarana nataon'ireo mpikambana avy amin'ireo vondrom-piarahamonina GV sy Advox.
Tiako ny mianatra mandika teny. Niaraka tamin'ireo mpiaraka miasa amiko ao amin'ny Zone9, natomboko ny fandikàna ho amin'ny fiteny amharika ny Global Voices tamin'ny 2012, araka izany dia nahay betsaka momba ny fanoratàna fitantarana niomerika sy ny asa fanaovana gazetin'olontsotra aho. Nahazo fahaizamanao vitsivitsy aho tamin'ny resaka fiarovana ety anaty aterineto sy ny fanafenana rehefa nanao asa fandikàna ny ‘Fiarovantena Dizitaly Hiatrehana ny Fanarahamaso [fr], torolàlana momba ny fiarovana ety anaty aterineto mba hanampiana ireo mpampiasa hiarovany ny tenany ety anaty serasera. Nandritra izany fotoana izany, nandika asa soratra (literatiora) ihany koa aho.
Mpankafy fatratra ny GV aho. Nandritra ny dimy taona farany teo, nahafinaritra ny làlana niraisako tamin'ny GV. Nanome ahy vintana maro nahafahako niasa niaraka taminà vondrom-piarahamonina maro mahafinaritra izy, ary niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Advox. Raha voafidy aho, tiako ny :
hanohy ny asa tsara ataon'ny GV.
hanampy hamorona ireo fotoana azo anaovan-javatra izay azoko tamin'ny alàlan'ny GV
hanampy ireo mpanoratra vaovao mba ho tonga eny amin'ny fanontàna ny zavatra nosoratan-dry zareo
Raha manana fanontaniana ianareo, aza mihafahafa, mifandraisa amiko amin'ny alàlan'ny pejy natao ho amin'izany na amin'ny Twitter @ endalk2006.